Olom-pirenena Hong Kong Maneho Ny Hatezeran’izy Ireo Noho Ny Fanakanana Azy Ireo Tsy Hiditra Ao Makaô · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2016 8:53 GMT
Maromaro ireo mpikatroka nihitsoka tsy afaka niditra tao Makaô tamin'ny 10 Oktobra. Sary avy amin'ny Long Hair Facebook.
Namarana ny fitsidihana telo andro nataony an'i Makaô ihany ny praiministra Shinoa Li Keqiang.
Tapa-bolana talohan'ny fitsidihany, nikorontana ny fanaraha-maso ny sisintanin'i Makaô. Olom-pirenena am-polony mahery avy any Hong Kong no tsy navelan'ny fifindramonina Makaô niditra tao noho ny filazana fa loza mitatao ho an'ny fiarovana ny tanàna izy ireo. Nahitàna mpamokatra sarimihetsika tsy miankina, mpikatroka LGBT ary koa mpanoratra momba ny fitetezam-pirenena tamin'ireo olom-pirenena ireo, izay nitarika ny maro hanontany raha manana lisitra mainty marobe nozarainy tamin'ny manampahefana Makaô sy ny manampahefana Shinoa ny governemantan'i Hong Kong.
Fari-pitantanana manokana ao Shina i Makaô sy Hong Kong, saingy mbola tsy anisan'ny tanibe Shina. Manana distrika, sisintany, governemanta, vola, polisy, ary koa fiteny manokana izy ireo.
Tonga tao Makaô niaraka tamin'ny mpitarika marobe avy amin'ny firenena miteny Portiogey ao Afrika sy Amerika Atsimo ny praiminisitra Li Keqiang mba hamonjy fihaonambe ara-barotra avo lenta izay mikendry hamolavola drafitra vaovao ho an'ity tanàna casino manankarena ara-bola eo amin'izao tontolo izao ity. Mpikatroka ny sivy tamin'ireo olom-pirenena Hong Kong tafahitsoka izay nikasa hanao fihetsiketsehana nandritra ny fitsidihan'ny Praiminisitra Shinoa ho fanoherana ny rafi-pifidianana teren'ny Shinoa ho an'i Hong Kong. Na dia efa mahazatra aza ny mahita mpanao fihetsiketsehana mihitsoka ao amin'ny sisin-tany alohan'ny hetsika nomanina, tsy navela hiditra tao Makaô kosa ny sasany tamin'ireo olom-pirenena Hong Kong satria mpikatroka taloha na mpikambana voasoratra anarana amin'ny vondrona mpianatra. Nizara ny tantarany tao amin'ny Facebook ny maro tamin'izy ireo.
Gaga i Fred Lam, mpanoratra boky momba ny fitetezam-pirenena, ary mavitrika ara-politika tamin'ny fiarovana ny hetsika tamin'ny 2008 raha nahita fa voampanga ho mandrahona ny fiarovana ny sisintanin'i Makaô izy tamin'ny 5 Oktobra. Nasain'ny sekoly iray hoavy ao Makaô izy mba hiresaka momba ny diany.
Voasakana tsy hiditra ao Makaô ihany koa i Roddy Shaw, mpikatroka LGBT tamin'ny Oktobra. Miahiahy izy sao misy fiantraikany amin'ny fidirany ao Shina sy ny firenena Aziatika hafa ilay marika ara-politika:
同 Lam Fai Fred 命運一樣 冇得入澳門境 其他同樣遭遇的人可否入境泰國或大陸？我短期內要飛此兩地，求幫忙！
Miaina ny manjò an'i Lam Fan Fred aho ary tsy afaka niditra ao Makaô. Manontany tena aho raha misy olona niaina tahaka izany kanefa nahazo niditra ny tanibe Shina sy Thailandy? Tsy maintsy hisidina any amin'ireo firenena roa ireo aho atsy ho atsy, mila toro-hevitra azafady!
Tamin'ny herinandro lasa, notanan'ny manampahefan'ny fifindramonin'i Thailandy nandritra ny ora vitsivitsy ilay mpikatroka mpianatra avy ao Hong Kong, Joshua Wong, ary nalefa sesitany nony farany. Nanazava ny manam-pahefanan'i Thailandy fa noho ny fangatahan'i Beijing no anton'ny fanapahan-kevitr'izy ireo.
Niatrika toe-javatra tahaka izany tamin'ny 5 Oktobra ihany koa ilay mpamokatra sarimihetsika tsy miankina Siuyea Lo izay mpivezivezy matetika ao Makaô. Nanoratra ny fandehan-javatra tao amin'ny Facebook izy:
今天應澳門朋友之邀過去帶短片工作坊 […] 上船前看到林輝入境被拒，心諗這幾年來往澳門數十次，演過《無花果》和《七月燒衣》，亦探過朋友買過手信，應該無野卦，頂多如上次般被扣查一會然後放行。
Nasain'ireo namana avy ao Makaô aho androany mba hanatontosa atrikasa momba ny horonantsari-mihetsika[…] nahita aho fa voasakana tsy hiditra ao i Fred Lam saingy mbola tsy nino aho fa mety ho tratran'ny toe-javatra tahaka izany koa. Tao anatin'ny taona vitsivitsy, nankany Makaô efa ho im-polo aho amin'ny maha mpilalao sarimihetsika ahy amin'ny filma roa, Fig sy A Summer Ghost Stories. Matetika koa aho mitsidika namana ao, ary tsy tokony hanana olana. Ny fakàna am-bavany no mety ho ratsy indrindra.
Haiko ny fizotran-javatra. Tsy navelan'ny toeram-pisavana e-channel handalo aho ary nitondra ahy tany amin'ny efitra ny manampahefan'ny fifindramonina mba hameno aratasy sy hamaly fanontaniana tsotra sasantsany. Tokony hamela ahy hiditra izy ireo amin'ny farany. Saingy diso anefa aho, nentina tany an-dalatsara aho mba hameno taratasy iray hafa. Avy eo nasaina nanasonia taratasy [filazana fandroahana]. Tohina aho. Nangataka ahy foana izy ireo mba handray ny sambo manaraka hiverina any Hong Kong. “Namariniko fanindroany ny sary, fa tena izy tokoa, niresaka ny polisy iray sy manampahefan'ny fifindramonina raha teo am-panaterana ahy hijery toerana. Nilaza tamin'ilay manampahefan'ny fifindramonina ilay polisy hoe, “reraka ny tongotro nivezivezy tetsy sy teroa androany”, angamba efa nanatitra olona am-polony mahery voaraoka izy.
Tafahitsoka tao amin'ny sisintany ihany koa tamin'ny 8 Oktobra i Roy Tam, mpanolo-tsainan'ny distrika sady mpanohana ny demokrasia. Nikasa hanao fitetezam-paritra ao Makaô izy ny fianakaviany.
Voasakana tsy hiditra ao Makaô tao amin'ny toeram-pisavana fifindramonina Makaô sy Zhuhai tamin'ny 10 Oktobra ihany koa i Derek Liu, mpikambana ao amin'ny komitin'ny Sendikan'ny Mpianatra ao amin'ny Oniversite Politeknika, izay vao nitsidika an'i Shina. Nalefa sesitany tany Zhuhai izy nony farany. Mampiseho ny zava-misy fa mbola henjana koka noho ny fifindramonin'i Shina Tanibe ny fanaraha-mason'ny fifindra-monina Makaô nandritra ny fitsidihan'i Li Keqiang. Nitatitra ny toe-draharaha tao amin'ny Facebook i Liu:
Tsy azoko. Mpikambana voasoratra anarana ao amin'ny sendikan'ny mpianatra fotsiny aho ary madio ny firaketana an-tsoratra momba ny fiainako manontolo. Ankehitriny aho voasakana tsy hiditra ao Makaô noho ny fitsidihan'ny mpitarika Shinoa. Mpizaha tany fotsiny aho ary milaza ianareo fa loza mitatao ho an'ny fiarovana anatiny aho?
Toy izao no fandehan'ny tantara: nikarakara dia tany Zhuhai sy Makaô nandritra ny faran'ny herinandro ny fianakaviako. Somary niahiahy aho fa mety hiatrika olana amin'ny fifindramonina any Shina Tanibe. Saingy nanavatsava ny fifindramonina fotsiny aho. Ny ampitso, notohizanay ny dianay tao Makaô saingy voasakana tsy hiditra ao aho. Mahafoy ny fahefany i Makaô mba hampifaly ny Antoko Komonista Shinoa. Tena mahatsikaiky fa afaka miditra ny tanibe Shina aho fa tsy afaka miditra ao Makaô.
Nohadihadiana ihany koa ireo mpizaha-tany
Tsy voafetra ho an'ny olom-pirenena Hong Kong ihany ny fankahalan'ny fifindramonina Makaô, fa voakasika ihany koa ny mpizaha tany avy amin'ny faritra “ratsy fiarovana”. Raha niditra tao Makaô ilay Miss Iran Melissa Razavi, izay vao avy nanatrika ny fifaninanana hatsaran-tarehy Manerantany Miss Global 2016 tany Filipina, notazonina nandritra ny adiny roa mahery tao amin'ny fifindramonina Makaô izy ary nangatahana mba hanasonia antontan-taratasy hahafahan'ny manampahefana hijery ny findainy sy ny entany. Nitaraina tany amin'ny fampahalalam-baovao ao an-toerana izy fa noraisina toy ny mpampihorohoro. Mpizaha tany maromaro avy any India ihany koa no nalaina am-bavany nandritra ny adiny telo mahery ary nofaritan-dry zareo ho “manala-baraka” sy “manavakavaka” ny fisavana an-tsisintany.
Nitranga tamin'ny Desambra 2014 nandritra ny fitsidihan'ny Filoha Shinoa Xi Jinping tao Makaô ihany koa ny fepetra fanaraha-maso ny sisintany tahaka izany. Maro ireo olom-pirenen'i Hong Kong izay nandray anjara tamin'ny fihetsiketsehana mpomba ny demokrasia ho amin'ny fifidianana no tsy navela niditra tao amin'ny fifindra-onina Makaô. [Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra, voasakana tsy hiditra tao Makaô ihany koa ny mpanoratra ity lahatsoratra ity tamin'ny volana Desambra 2014 .]
Lisitra mainty manerana ny sisintany?
Nahatonga ny maro hanontany ny zava-misy raha manana lisitra mainty marobe ny governemantan'i Hong Kong, izay nozarainy tamin'ny manampahefana ao Makaô sy Shina. Araka ny fanehoan-kevitr'i Roddy Shaw tamin'ny fandroahana azy, misy ny ahiahy fa mety ampiasaina hamelezana ireo mpikatrok'i Hong Kong ao amin'ireo firenena mpanohana an'i Beijing tahaka an'i Thailandy sy i Malayzia ny lisitra mainty. Nosakanan'ireo firenena roa tonta ireo tsy hiditra ao aminy ny mpianatra mpikatroka avy ao Hong Kong noho ny tahotra fa mety hampahatezitra an'i Beijing ny fitsidihany.